Awaamiir lagu soo rogay Shaqaalaha Garoonka Magaalada Hargeysa – STAR FM SOMALIA
Awaamiir lagu soo rogay Shaqaalaha Garoonka Magaalada Hargeysa
Xukuumadda Somaliland, ayaa soo rogtay awaamiir ah inaanay Shaqaalaha Garoonka Magaalada Hargeysa isticmaali karin teleefanada casriga ah, ee laga geli karo barraha ay bulshada ku wada xiriirto.
Wasiirka Duulista & Hawada Somaliland, Cumar Sheekh Maxamed Faarax, ayaa sheegay in Shaqaaluhu ay ka mashquuli karaan hawlaha ay u jooggaan Garoonka, sidaasi daraadeedna aanay isticmaali karin teleefanadaasi.
Wasiirka, ayaa sidoo kale sheegay in tani ay ku xoojinayan ammaanka dadka safarka ee ka soo degaaya, kana dhoofaaya Garoonka Magaalada Hargeysa.
Isagoo Saxaafadda kula hadlaayay Magaalada Hargeysa, ayaa xusay haddii shaqaalaha loo ogolaado adeegsiga teleefanadooda xilliga shaqada, ay keeni karto inaysan feejignaan.
Cumar Sheekh Maxamed Faarax, ayaa waxaa uu intaa ku daray in aanay doonayn wixii diyaaradda Daallo Airlines ku qabsaday Garoonka Magaalada Muqdisho, 2-dii bishii February ee sanadkan.
Ciidamada Dowlada oo Muqdisho ku qabtay Hub kala duwan iyo Rasaas aad u badan(Daawo Sawirada)
Nabadsugida oo xalay Muqdisho ku qabatay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray